Ciyaartoy Ku Dhintay Toogasho Xalay Dhacday +VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ciyaartoy Ku Dhintay Toogasho Xalay Dhacday +VIDEO
Waxa halkiisa kasii socda toogashooyinka iyo tacaddiyada ka dhanka ah dadka madow ee Maraykanka, waxaana xalay ku jiray dadkii xalay xabbaddu haleeshay Corey Ballentine oo dhawaan ay kooxda New York Giants kala soo baxday xulashadii da’yarta Jaamacadaha.
Toogasho ka dhacday Dhismaha Topeka ee Kansar City xilli hore oo Axaddii ahayd, ayaa waxa uu dhaawac kasoo gaadhay Corey Ballentine oo maalmo dhawayd si rasmi ah ugu biiray naadiga horyaalka NFL-ka ee New York Giants, laakiin ka tirsan kooxda Washburn Ichabods, waxaana goobtaas ku dhintay wiil ay saaxiibbo ahaayeen oo la socday oo ay wada dhigan jireen jaamacadda Washburn University, sidoo kalena ka mid ahaa ciyaaryahannada Jaamacadda.
Warararka laga helayo dalka Maraykanka ee la xidhiidha dhacdadan ayaa sheegaya in xaaladda Ballentine aanay halis ku jirin oo ay u badan tahay inuu kasoo kabto iyadoo aanay saamayn xirfaddiisa ciyaareed, hase yeeshee saaxiibkiisii ay jaamacadda wada dhiganayeen uu naf-baxay.
Madaxweynaha Jaamacaddaas, Jerry Farley oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay maalin naxdin badan u tahay oo ay murugo isku beddeshay xaflad dabbaal-deg ah oo ay ardaydu lahaayeen.
Dr. Farley waxa uu caafimaad u rajeeyey ciyaartoyga dhaawacmay, laakiin war-saxaafadeed ay soo saartay New York Giants ayaa waxay ku sheegtay inay ka war hayso xaaladda naxdinta leh ee ka dhacday halkaas, isla markaana ay la socdaan dhaawaca soo gaadhay ciyaartoygooda.
“Waxaanu la hadalnay Corey, waxa uu ku jiraa cusbitaalka waanu soo kabanayaa. Waxa aanu murugada la qaybsanaynaa qoyska uu ka dhintay Dwane Simmon.” ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ay Giants soo saartay.